सामसु Galaxy ग्यालेक्सी M31 आधिकारिक हो: चार क्यामेरा र 6.000 एमएएच ब्याट्री | Androidsis
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी M31 आधिकारिक हो: चार क्यामेरा र 6.000 mAh ब्याट्री
सामसु mid मध्य-दायरा A श्रृंखला को विभिन्न प्रक्षेपण पछि बढ्छ। अब यो एम लाइन को बारी, विशेष गरी मोडेल गैलेक्सी एमएक्सएनएमएक्स, एक मध्यम-दायरा उपकरण जो कोरियाई निर्माताले थप गरेको लाभका कारण उच्च-अन्त उपकरण मानिन सकिन्छ।
यो ठूलो समावेश गरिएको ब्याट्रीको कारण आश्चर्यचकित छ, तर त्यहाँ अन्य चीजहरू छन् जुन यसमा हाम फाल्दछ ग्यालक्सी M30शक्तिशाली मुख्य सेन्सर सहित। यसको लागि पछाडि चार क्यामेरा समावेशीकरण उल्लेख गर्न आवश्यक छ, यसको परिवारको भाई भन्दा एक।
1 सामसु Galaxy ग्यालेक्सी M31 का सुविधाहरू
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी M31 का सुविधाहरू
.6,4..XNUMX इन्चको सुपर AMOLED स्क्रिन राख्छ फुलएचडी + रिजोलुसनको साथ र गोरिल्ला ग्लास with सँग सुरक्षित छ। फ्रन्टमा तपाई ड्रप-आकार नचको साथ सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ, मेगापिक्सलको संख्या is२ हो, यो M3 को १ 32 मेगापिक्सल र १ MP MP को दोब्बर गरेर बढी छ। को M30s.
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी M31 को प्रोसेसर Exynos 9611 XNUMX ११ हो आठ कोरको साथ, यो कूल GB जीबी र्याम र or6वा १२64 जीबी भण्डारणको साथ आउँनेछ। समावेश गरिएको ब्याट्री ,128००० एमएएच छ, ग्यालक्सी एम s०० द्वारा प्रयोग गरिएको हो र जसले USB-C केबलको साथ १ 6.000 डब्लुमा द्रुत चार्जिंग प्रदान गर्दछ।
जडानको सर्तमा, यसले G जी कनेक्टिविटी समावेश गर्ने निर्णय गर्दछ, त्यसैले कम से कम यसलाई इन्कार गरियो किनभने यसले सीपीयू माउन्ट गर्दछ जुन पाँचौं-पुस्ताको जडानलाई समर्थन गर्दैन। त्यहाँ Wi-Fi र ब्लुटुथ पनि छ, हामी हेडफोन ज्याक पनि प्रयोग गर्न सक्दछौं किनकि यो mm. mm मिमी जैकको साथ आउँदछ।
El स्यामसंग ग्यालेक्सी M31 चार क्यामेरा सेन्सर मा दांव, मुख्य एक 64 8 मेगापिक्सल, एक me मेगापिक्सेल चौडा कोण, अर्को me मेगापिक्सेल म्याक्रो र me मेगापिक्सलको गहिराइ सेन्सर छ। थपिएको लेन्सहरूमा एक वर्ग माउन्ट गर्नुहोस्।
यस मोडेलले एन्ड्रोइड १० अपरेटिंग प्रणालीलाई एक यूआईको साथ समावेश गर्दछ र रियर फिंगरप्रिन्ट रिडर समावेश गर्दछ, क्यामराको ठीक ठीक छेउमा।
यो भारतीय बजारमा निलो र कालो रंगमा आइपुग्छ, यो अमेजनमा आउँदो दिनमा उपलब्ध हुनेछ। को गैलेक्सी एमएक्सएनएमएक्स GB जीबी / GB6जीबीको लागत १ 64 २ युरो हुनेछ र GB जीबी / १२192 जीबी मोडेलको परिवर्तनमा २०6 यूरो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी M31 आधिकारिक हो: चार क्यामेरा र 6.000 mAh ब्याट्री
एन्ड्रोइड ११ ग्यालबेंचमा ग्यालक्सी एस १० प्लस द्वारा परीक्षण गरिएको थियो
Realme X50 Pro 5G अब आधिकारिक छ। नयाँ उच्च-अन्त Realme को मूल्य निर्धारण र मूल्य